Tudomus gosipụtara ụzọ ọhụrụ iji zụta na ire ụlọ | ECommerce ozi ọma
Tudomus bu uzo ohuru ohuru nke amuru na nzụta, ire na mgbazinye nke ulo, ndi oru ya na eme ya nke ndi kompeni eweputara. Agbanyeghị, na-emegide ihe ọ nwere ike iyi, Tudomus abụghị naanị ụzọ ọzọ a ga-esi nweta ala. Ọ bụ ọhụrụ oru ngo, echiche na 100% Spanish isi obodo, dabere na ụdị nke mmekota aku na uba.
Tudomus bụ ike online ahịa ngwá ọrụ na ọ bụghị nanị na-egbo mkpa nke ndị na-achọ zụta, ree ma ọ bụ gbazite ụlọ na Spain, ma ọ bụkwa ihe magburu onwe n'aka ọrụ onwe gị, ebe ọ bụ na ọ na-ekesa uru etinyere na ọrụ ọ bụla emechiri emechi site na Portal n'etiti ndị ọrụ na-emekọrịta ahịa ya.
1 Otú Tudomus si arụ ọrụ
2 Dị naanị na Spain, ọbụlagodi maka ugbu a
3 Ọzọ echiche iji kwalite ọrụ onwe na mmekọrịta akụ na ụba
Otú Tudomus si arụ ọrụ
Ọrụ Tudomus dị mfe. A na-ekenye akụ ọ bụla etinyere na Tudomus usoro nke onyinye maka ụdị mmekorita ọ bụla onye ọrụ chọrọ ịnye, onye ọrụ ahụ nwere ike isonye site na ịkpọ ndị ọrụ ọhụrụ ka ha sonye na netwọkụ ahụ, na-atụ aro ndị nwere ikike ịzụta ma ọ bụ ọbụna na-egosi ụlọ ndị dị na Mpaghara ha (ezigbo ụlọ ọrụ ụlọ).
Performancerụ ọtụtụ ọrụ ndị a n'otu oge ga-agbakọta ihe nrite ndị a, ma tudomus nwere ike bụrụ ọtụtụ ndị ọrụ isi mmalite ego na-akwụ ụgwọ yana itinye ego 0.
Ihe oru ngo a, nke egosiputa teknụzụ, na-adabere na netwọkụ mmekọrịta iji wulite netwọkụ azụmahịa sara mbara nke na-eme ka ọbịbịa nke ngwaahịa a ruo onye ahịa ikpeazụ.
Dị naanị na Spain, ọbụlagodi maka ugbu a
Ugbu a, Tudomus nwere naanị ụlọ na Spain, a sụgharịrị ya gaa n'asụsụ 2 ma dị maka ndị ọrụ Europe, na-enwe olileanya na n'ọdịnihu dị nso iji tinye ụlọ site na mba ndị ọzọ dị na Europe.
Ọzọ echiche iji kwalite ọrụ onwe na mmekọrịta akụ na ụba
Tudomus malitere ọrụ ya na Jenụwarị 2015 ma nweeworị ụlọ 1200 (ọkachasị ụlọ na Madrid na Barcelona) wee kesara ndị ọrụ ya € 20.000 na onyinye. A na-emepụta usoro a n'ime ụlọ ọrụ nke akụ na ụba mmekọrịta, usoro akụ na ụba nke a na-ekekọrịta ọrụ site na ntanetị.
Ebumnuche nke Tudomus bụ inye ndị niile chọrọ ịbanye na azụmaahịa ụlọ ịbanye na azụmaahịa ụlọ. N'oge na-adịghị anya, ikpo okwu ga-enwe usoro ọzụzụ na ngwa ọrụ niile dị mkpa iji wee mara ọrụ ụlọ ma bụrụ ọkwa ọrụ na ogo, maka ndị na-azụ ahịa mba na ndị chọrọ ịzụta ma ọ bụ gbazite ụlọ.
Tudomus nwere ngalaba ewepụtara maka ọrụ nke ndị ọrụ ya, obodo, ebe a na-akọrọ akụkọ banyere mpaghara ahụ (Mmefu maka ịzụta ụlọ, Kedu ọnụahịa ụlọ m, ...) yana ọrụ nke onye ọrụ ọ bụla, inwe ike oge niile na-esochi ihe na-eme na ndị otu obodo tudomus, onyinye, mmekorita ọhụụ, akụkọ sitere na ngalaba, ...
N'iburu ọdịdị nke Tudomus, onye na-ere ụlọ, bụ onye na-akpọsa ihe onwunwe ha n'efu, na-agba mbọ ịkwụ ụgwọ ọrụ nke a ga-achọ naanị ma ọ bụrụ na ire ere. Nkwekorita a abughi ndi ozo, ya bu, onye erere ahia nwere ike ibiputa ulo ha na nhazi ala ndi ozo. Ozugbo ọ natara onyinye site n'aka onye zụrụ ahịa, na ire ma ọ bụ mgbazinye emezigharị, tudomus na-ekesa kọmịshọn ahụ n'etiti ndị ọrụ sonyere na azụmaahịa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Tudomus gosipụtara ụzọ ọhụrụ iji zụta na ire ụlọ
ire ere ụlọ dijo
Oge eruola ịchọta blog dị ka nke ahụ ebe ị nwere ike ịkekọrịta akụkọ sitere na mpaghara ahụ, ma lee ihe m na-achọ na ihe ọ bụla, yabụ gaa n'ihu ụmụ okorobịa na ọchụnta!
Gaa na ire ere
Ọ ga-amasị m nọmba ịkpọtụrụ ekwentị iji kpokọta ozi ndị ọzọ gbasara ibe a. Daalụ. Echiche kacha mma
Zaghachi Maria Jesus Muňiz
Ndewo, enwere m olileanya na a na-anabata ngwaahịa pụrụ iche na nke agwa mara.
Dị ezigbo mma maka ịmepụta ihe
Ọhụrụ rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ Google na-arụ ọrụ ugbu a